Zucchini ratatouille र कुखुरा संग भरिएको | बेजिया
Zucchini ratatouille र कुखुरा संग भरिएको
मारिया vazquez | 20/07/2021 10:00 | सलाद र तरकारीहरू
आइतवारमा हामीले तपाइँसँग रेसिपी साझा गरे बदाम संग कुखुरातपाईलाई याद छ? आज, हामी मौलिक तरीकाले तपाईंको मेनूमा कुखुरा समावेश गर्नका लागि अन्य तरिकाहरू प्रस्ताव गर्दछौं। र त्यो यो हो zucchini ratatouille र कुखुरा संग भरिएको तिनीहरू कुनै पनि टेबलमा राम्रो देखिन्छन्।
यो ती रेसिपीहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंको आँखामा प्रवेश गर्दछ यसको प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद। तपाईंले गर्न सक्ने एक विधि एक शाकाहारी नुस्खा मा रूपान्तरण केवल कुखुरालाई बिरूवा उत्पत्तिको प्रोटीनको साथ बदल्नुहोस् जस्तै टोफु, टिमथ, हेउरा ... तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्दो छनौट गर्नुहोस्!
यो जटिल लाग्न सक्छ, जबकि यो तयारी धेरै सरल छ। र यदि हामीलाई उनको बारेमा केहि मनपर्‍यो भने त्यो हो यहाँ सबै खाईन्छ, यो zucchini भरिने को एक मात्र कन्टेनर हो भनेर नसोच्नुहोस्। लगहरू पोष्ट गरिएको छ त्यसैले तिनीहरू नरम छन् र खान सकिन्छ।
१ ठूलो zucchini
१ काटिएको प्याज
१ हरियो घन्टी मरिच
१/२ रातो घण्टी मिर्च, काटियो
१ पाकेको टमाटर
२ गाढा कुखुराको छाती फिल्ट्स, कीमा बनाइएको
सिलेण्डरमा zucchini काट्नुहोस् र ती खाली गर्नुहोस्, लुगाहरू आरक्षित गर्दै। सिलिन्डरहरू ओभन-सुरक्षित डिशमा राख्नुहोस्, मौसम, भद्राक्षको तेलको साथ रिमझिम र नरम नभएसम्म अझैसम्म आकारमा बेक गर्नुहोस्। मेरो केसमा यो १º० सेन्टिग्रेडमा २० मिनेट थियो
यस बीच, दुई चम्चा तेलको साथ प्यानमा प्याज र खुर्सानी sauté २० मिनेटको बखत।
समय बित्यो, zucchini मासु समावेश गर्नुहोस् पासा र more थप मिनेट।
पछि पासा टमाटर थप्नुहोस् र मध्यम कम तातो मा १ 15 मिनेट को लागी खाना बनाउनुहोस्।
ती १ minutes मिनेटको फाइदा लिनुहोस् कुखुराको टुक्रा काट्नको लागि, यदि तपाईंले हालसम्म त्यसो गर्नुभएको छैन भने, मौसम र यो यो प्यानमा साटा गर्नुहोस् मध्यम-उच्च गर्मी मा।
बाँकीको साथ कुखुरा मिश्रण गर्नुहोस् भरिने र रिजर्वको तत्त्वहरूको।
जब zucchini सिलिन्डर कोमल छन्, तिनीहरूलाई भर्नुहोस् र शीर्ष मा एक सानो grated पनीर जोड्नुहोस्.
ओभनमा तिनीहरूलाई फिर्ता गर्नुहोस् जब सम्म पनीर पग्लिएन।
रटाटोइले र कुखुराको तातो zucchini को सेवा गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » सलाद र तरकारीहरू » Zucchini ratatouille र कुखुरा संग भरिएको
Table टेबलवेयर तपाईंको टेबललाई र colorको एक टच दिन
जोडी भित्र मानसिक अराजकतासँग कसरी व्यवहार गर्ने